Izindaba - Amaphutha ajwayelekile kanye nokuxazulula inkinga komshini wokuminyanisa ibhokisi
Umshini wokucindezela i-Carton amaphutha avamile nezindlela zokuxazulula izinkinga: amaphutha omshini wokuhlola, avame ukuboniswa kuphaneli yokubonisa ikhompuyutha, kodwa hhayi ngempela amaphutha e-software namakhompyutha, kufanele uhlaziye ngokucophelela, unake yonke imininingwane, ukuze ukuxazulula inkinga kokugcina kunikeze ulwazi oluningi njengalokhu. kungenzeka.
Izindlela zokuxazulula izinkinga ezilandelayo kufanele zenziwe ngokulandelana:
Isoftware ivamise ukuphahlazeka:
Ukuhluleka kwezingxenyekazi zekhompuyutha.Sicela ulungise ikhompuyutha ngokulandela imiyalelo yomkhiqizi.Ukuhluleka kwesofthiwe, xhumana nomkhiqizi.Ukuthi lesi simo senzeka yini ngesikhathi sokusebenza kwefayela.Kube nephutha ekusebenzeni kwefayela.Kube nenkinga ngefayela elikhishiwe.Bheka imiyalelo yokusebenza kwedokhumenti efanele esahlukweni ngasinye.
2. test force zero show ukudideka:
Hlola ukuthi intambo yaphansi (ngezinye izikhathi ayifakwanga) umkhiqizi ngesikhathi sokulungisa iphutha ithembekile.Imvelo isishintshe kakhulu.Umshini wokuhlola kufanele usebenze endaweni ngaphandle kokuphazamiseka okusobala kozibuthe.Izinga lokushisa kanye nomswakama wendawo ezungezile nakho kuyadingeka.Sicela ubheke imanuwali yomsingathi.
3. amandla okuhlola abonisa kuphela ubukhulu:
Linganisa ukuthi inkinobho icindezelwe yini.Hlola ukuxhumana.Hlola ukuthi ukucushwa kwekhadi le-AD kokuthi Izinketho kushintshile yini.Isikhulisi sonakele, thintana nomkhiqizi.
4. ifayela eligciniwe alitholakali:
Isofthiwe inesandiso sefayela esimisiwe esimisiwe ngokuzenzakalelayo, noma ukufaka esinye isandiso lapho igcinwa.Ukuthi uhla lwemibhalo olugciniwe lushintshile.
5. Isofthiwe ayikwazi ukuqaliswa:
Hlola ukuthi i-dongle yesofthiwe ifakiwe yini embobeni yekhompyutha ehambisanayo.Vala ezinye izinhlelo zesofthiwe futhi uziqalise kabusha.Ifayela lesistimu lale softhiwe lilahlekile futhi kufanele lifakwe kabusha.Ifayela lesistimu yale softhiwe yonakele futhi kufanele lifakwe kabusha.Xhumana nomkhiqizi.
6. Iphrinta ayiphrinti:
Hlola imiyalelo yephrinta ukuze ubone ukuthi ukusebenza kulungile.Ukuthi iphrinta elungile ikhethiwe.
7. okunye, angaxhumana nabakhiqizi nganoma yisiphi isikhathi, futhi enze irekhodi elihle.
Umshini wokucindezela i-Carton uwuhlobo olusha lwensimbi olucwaningwayo futhi lwathuthukiswa ngokwezinga elisha lezwe.Ithuluzi ngokuyinhloko linemisebenzi emithathu: ukuhlola amandla acindezelayo, ukuhlola amandla okunqwabelanisa nokuhlola okujwayelekile kokucindezela.Ithuluzi lamukela i-servo motor kanye nomshayeli ongenisiwe, isikrini esikhulu sokuthinta i-LCD sokuthinta, inzwa ephezulu enemba, ikhompyutha ye-single-chip, iphrinta nezinye izinto ezithuthukile zasekhaya nezangaphandle, ezinokulawulwa kwejubane okulula, ukusebenza okulula, ukunemba kwesilinganiso esiphakeme, ukusebenza okuzinzile, okuphelele. imisebenzi kanye nezinye izici.Leli thuluzi liwuhlelo olukhulu lokuhlola lokuhlanganisa i-electromechanical, izidingo zokuthembeka okuphezulu, ukwakheka kwesistimu yokuvikela eminingi (ukuvikelwa kwesoftware nokuvikelwa kwehadiwe), yenza uhlelo luthembeke futhi luphephe kakhudlwana.